အယ်ဖိုး: သီချင်းတွေကို VCD KARAOKE စာတန်းထိုးသလို Desktop ပေါ်မှာစာသား ပေါ်ပေးမဲ့ Software လေးပါ
သီချင်းတွေကို VCD KARAOKE စာတန်းထိုးသလို Desktop ပေါ်မှာစာသား ပေါ်ပေးမဲ့ Software လေးပါ
ကဲဗျာ. ခေါင်းစဉ်မြင်လိုက်တာနဲ့ စိတ်ဝင်စားသွားကြမှာပါ
သီချင်းစာသားတွေကို VCD Karaoke စာတန်းထိုးသလိုလေး လိုက်ပေါ်ပေးနေမှာပါ (English Song Only) နော်..
ဟီး ဟီး .. မြန်မာသီချင်းတွေတော့ ရဘူး အရင်ဆုံး ဒီမှာ အရင်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲလိုက်ဗျာ..ပြီးရင် install လုပ် install လုပ်တဲ့နေရာမှာ
Next ကိုပဲ ဆက်တိုက်နှိပ်သွားလိုက်ပါ Select Players ဆိုပြီးဘာညာသာရကာ ပြထားတဲ့နေရာမှာ
Support AIMP2,Support MediaMonkey,Support JetAudio စတဲ့နေရာမှာ လည်းဘာမှ ရွေးမပေးပါနဲ့ 
ကျွန်တော် install လုပ်တုန်းက အဲ့နေရာမှာတော်တော်တိုင်ပတ်သွားလို့ ပါ အဲ့ဒါကြောင့် အခုလို ရှင်းပြပေးရတာပါ
ဆရာကြီးလုပ်တယ်လို့ တော့ မထင်စေချင်ပါဘူး install လုပ်တာက အစ လိုက်ပြောနေလို့:)
အကုန်လုံး Next ပြီးပြီဆိုရင်တော့ install လိုက်လို့ ရပါပြီ
(တစ်ခုကျန်သွားလို့ ပါ ကျွန်တော် ဒေါင်းလုပ်ဆွဲထားတဲ့ဖိုင်မှာ keygen.exe ဆိုပြီး ဖိုင်တစ်ခုပါပါတယ် ဒါပေမဲ့
အဲ့ကောင်ကို Antivirus တွေက ပိတ်ပစ်ပါတယ် အဆင်မပြေပါဘူး အဲ့ဒါကြောင့် serial ဆိုပြီး notepad ဖိုင်တစ်ခု
ထည့်ပေးထားပါတယ် အဲ့ထဲမှာ name နဲ့ regristraion code ကိုထည့်ပေးထားပါတယ် လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ )
ကဲ install ပြီးသွားရင် သီချင်းတစ်ပုဒ် လောက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ကြပါ .. English သီချင်းနော်..
ကြည့်ကြည့်လိုက်ဗျာ. ကျွန်တော် Sean Kingston ရဲ့Beautiful Girls ဆိုတဲ့သီချင်းဖွင့်လိုက်ပြီ ဒီလိုလေးပေါ်လာပါပြီ
ကဲ ကြည့်ကြည့်လိုက်ဗျာ.. ဒါပေမဲ့ တစ်ခါတစ်လေ Lyric တွေကို သူ့ ဟာသူ မပြပေးတာမျိူးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်
ဘယ်လိုမျိူးတွေကို မပြပေးတာလဲဆိုတော့ ကိုယ်ဖွင့်တဲ့သီချင်း နာမည်ကို သူမသိတာပါ အဲ့ဒါကြောင့်
အရေးအကြီးဆုံးက သီချင်းတွေကို rename ပေးတဲ့နေရာမှာသေသေချာချာလေးပေးရင် ကိုယ်တောင်ရှာစရာမလိုပါဘူး သူ့ ဟာသူ ရှာတွေ့ ပါတယ်.. တကယ်လို့ သူရှာမပေးရင်လည်း ကိုယ့်ဟာကိုယ် ရှာပေးရပါတယ် ကိုယ့်ဟာကိုယ် ရှာရတာကလည်း မခက်ပါဘူး ဒီလိုလေးဗျာ.
မြှားပြထားတဲ့ ဟာလေးကို click လိုက် ပါ
အဲ့ဒါဆို ဒီလို box လေးထပ်ကျလာပါလိမ့်မယ်..
ရှာလို့ တွေ့ ပြီဆိုရင် အဲ့လိုလေး ပြပါတယ်.. တကယ်လို့ ရှာနေတယ်ဆိုရင်တော့ ရှာနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေး
ပေါ်နေမှာဖြစ်ပြီး plz wait ခဏစောင့်ရပါတယ်..
အဲ့မှာ Artist ဆိုတဲ့နေရာမှာ အဆိုတော်နာမည်ထည့်ပြီး Title ဆိုတဲ့နေရာမှာသီချင်းနာမည်ထည့်လိုက်ပါ
ကိုယ့်ဟာကိုယ်တောင်ထည့်စရာမလိုပါဘူး အဲ့ဒါတွေကို ဘေးက down arrow လေးကို နှိပ်လိုက်ရင် ရှိပါတယ်..
ပြီးရင် အောက်က ကျလာတဲ့ သီချင်းတွေထဲက တစ်ပုဒ်ကို double click လိုက်ရင် သူ့ အလိုလို
သီချင်းသံနဲ့စာသားနဲ့ တစ်ထပ်တည်း ပေါ်နေမှာပါ (တစ်ချိူ့ က အသံနဲ့စာသား တစ်ထပ်တည်းကျအောင် မပေါ်ပါဘူး) ... တကယ်လို့ မပေါ်ဘူးဆိုရင် နောက်တစ်ခုကို ထပ်ပြီး နှိပ်ပေးလိုက်ပါ
တစ်ခုမပေါ်ရင်တစ်ခုကိုထပ်ပြီးနှိပ်ပါ . တကယ်လို့ Desktop ပေါ်မှာ floating lyric(အပေါ်က ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း စာသားအနီရောင်လေးကိုပြောတာပါ) အနေနဲ့ မပေါ်ဘူးဆိုရင်တော့ taskbar ပေါ်က miniyric ဆိုတဲ့ icon လေးပေါ်မှာ right click နှိပ်ပြီး floating lyric ဆိုတာလေးကို ရွေးပေးလိုက်ပါ
ကဲဗျာ. အားလုံးပြီးပြည့်စုံအောင်လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ google မှာသီးခြား သီချင်းစာသားတွေလိုက်ရှာနေစရာမလိုတော့ပဲ မိမိတို့ ရဲ့ Desktop ပေါ်မှာ VCD Karaoke စာတန်းထိုးသလို သီချင်းတိုင်းကို လိုက်ဆိုလို့ ရပါပြီ အဲ့ Lyric တွေကို save ထားလို့ လည်းရပါတယ်. save lyric ဆိုပြီးရှိပါတယ်..
task bar ပေါ်မှာ right click, lyric ဆိုတာလေးရဲ့ လေးမှာ save lyric ဆိုပြီးရှိပါတယ် ထုံးစံအတိုင်း
Ctrl+S ဆိုရင်လည်းရပါတယ် . အဲ့ဒါတွေကိုပြန်ဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင် အဲ့နေရာမှာပဲ open lyric ဆိုပြီးရှိပါတယ်..
ကဲ ကျွန်တော်တို့ MMIT က အကိုတွေ အမတွေအတွက် အလွန်အသုံးဝင် အဖိုးတန်မဲ့ Software လေးတစ်ခု
ဖြစ်တာကြောင့် အားရ၀မ်းသာစွာနဲ့တင်ပေးလိုက်ရပါတယ်. ကျွန်တော်လည်း အဲ့ဒါလေးကို ဆိုဒ်တစ်ခုကတွေ့ တာပါ မူရင်းလင့်ခ်ကို မဖော်ပြနိုင်တဲ့အတွက် အရင်ရေးသားသူကို ဒီမှာပဲ တစ်ခါတည်းတောင်းပန်လိုက်ပါရစေ
နားလည်လိမ့်မယ်လို့ လည်းထင်ပါတယ် .. ဗျာ.
တကယ်လို့ အဆင်မပြေသေးဘူးဆိုရင်တော့ ကျွန်တော် sample လုပ်ထားတဲ့ Video ဖိုင်လေးရှိပါတယ်. အဲ့ဒါကိုတော့ ဒီမှာ သွားယူလိုက်ပါ
လုပ်လို့ အဆင်မပြေဘူးဆိုမှ ယူပါဗျာ. ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရတာ ကြာမှာစိုးလို့ ပါ ဘာမှတော့သိပ်မဟုတ်ပါဘူး
lyric ရှာလို့ မတွေ့ တဲ့ Tokyo Drift ကို ရှာပြပေးထားတာပါ အဲ့ဒါ ပထမအပေါ်ဆုံးတစ်ခုကိုနှိပ်လိုက်တော့
စာသားနဲ့ အသံနဲ့ ကမကိုက်သေးဘူး အဲ့ဒါနဲ့ဒုတိယ တစ်ပုဒ်ကို နှိပ်လိုက်မှ ကွက်တိကျသွားတယ်.
အဲ့ဒါလေးကို လုပ်ပြထားတာပါ .. Sample video လေးက quality တော့ သိပ်မကောင်းပါဘူး web cam
နဲ့ မရရအောင်ရိုက်ထားလို့ ပါ Screen Recorder တွေက အဲ့ floating lyric တွေကို
လုံးဝလိုက်မမှတ်ပေးပါဘူး အဲ့ဒါကြောင့် web cam နဲ့ ရိုက်ထားလို့ quality တော့သိပ်မကောင်းပါဘူး
အဲ့ဒါကလုံးဝကို Vcd စာတန်းထိုးသလိုပါပဲ .. ကျော်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း
အဲ့ကျော်လိုက်တဲ့နေရာအထိ စာသားက ရောက်သွားမှာပါ
ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ အားလုံး အဆင်ပြေလောက်ပါပြီဗျာ. အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့ ကျွန်တော် အရေးအသား